အစ္စရေး၏ Iron Dome နည်းပညာ တရုတ်ဟက်ကာတို့ ရယူပြီးသားလား(သာကောရဲ့ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးဖြစ်လာပုံအလွယ်လမ်းကိုလိုက်ပီးအလွဲတွေဘဲလုပ်)
အစ္စရေးနိုင်ငံဟာ သေးငယ်ပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်လျှင် အမေရိကန်တိုက လေးစားရလောက်အောင် ရှေ့ရောက်နေပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံသေးသေးလေးထဲမှာ အစ္စရေး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအတွက် ကြီးမားတဲ့ ကွန်ယက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေ၊ အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဟက်ကာတွေ နှင့် ဟက်ကာ ကာကွယ်ရေးအမှုထမ်းတွေနှင့် ပြည့်နှက်နေပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် တရုတ်ဟက်ကာများ အနေဖြင့် အစ္စရေးတို့၏ ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက် ကွန်ပျူတာများထဲသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါက အမေရိကန် ဆာဗာများသာမက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမဆို ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းရှိမှာ သေချာသလောက်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက ကွန်ယက်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက တရုတ်ဟက်ကာများဟာ အစ္စရေးတို့၏ ကွန်ပျူတာများမှ Iron Dome လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် ဆက်နွယ်သည့် အချက်အလက်များကို ခိုးယူသွားကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေသည့် ထိပ်ပိုင်း ကုမ္ပဏီ ၃ ခုဖြစ်သော Elisra Group၊ အစ္စရေးလေကြောင်းထုတ်လုပ်ရေးနှင့် Rafael အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေးစနစ် အစရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီများကို ၂၀၁၁ အောက်တိုဘာလ နှင့် ၂၀၁၂ ဩဂုတ်လ ကြားမှာ တရုတ်ဟက်ကာများဟာ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို ဘရိုင်ယန်က ရေးသားခဲ့တာပါ။
အဲဒီ့ဖြစ်စဉ်တွင် တရုတ်ဟက်ကာများအနေဖြင့် လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး အချက်အလက်အများအပြားကို ထို ကုမ္ပဏီ ၃ ခုမှ ခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ CyberESI မှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အချက်အလက်အများစုဟာ Arrorw III မစ်ဇိုင်းစနစ်များ၊ မောင်းသူမဲ့ယာဉ်များနှင့် တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးများ အပါအဝင် တခြားနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ နှင့်၎င်းတို့၏ ဉာဏနှင့်သက်ဆိုင်သော မူပိုင်ခွင့်အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
CyberESI ရဲ့အဆိုအရ ဒီလိုခိုးယူသွားတဲ့ ဟက်ကာများဟာ တရုတ်စစ်တပ်က ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ အုပ်စုလို့သိရပါတယ်။ ဗာဂျီးနီးယားအခြေစိုက် ဆိုင်ဘာလုံခြုံရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Mandiant ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ စုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီအုပ်စုဟာ Unit 61398 လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်ကြည်းတပ် အထွေထွေဝန်ထမ်းများရုံး အမှတ် ၃ ဌာနမှ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီ Unit 61398 အဖွဲ့ဟာ အမေရိကန် လျှို့ဝှက်ချက်များကို အဆက်မပြတ်ခိုးယူရန် ကြိုးစားမှုကြောင့် အမေရိကန်တရား‌ရေးဌာနမှ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလက စွပ်စွဲထားသော အဖွဲ့ဝင်လေးဦးကို စွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ၄ ဦးထဲမှ ၂ ယောက်သည် တရုတ်စစ်ယူနီဖောင်းကို ဝတ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရတယ်လို့ FBI ၏ ပိုစတာကို ကိုးကားပြီး သိရပါတယ်။
Part of the building of ‘Unit 61398’,asecretive Chinese military unit, is seen in the outskirts of Shanghai February 19, 2013. The unit is believed to be behindaseries of hacking attacks,aU.S. computer security company said, promptingastrong denial by China and accusations that it was in fact the victim of U.S. hacking. REUTERS/Carlos Barria (CHINA – Tags: POLITICS SCIENCE TECHNOLOGY MILITARY) – RTR3DZ82
တကယ်တော့ နောက်ဆုံးခိုးယူမှုတွေဟာ အမေရိကန်သာမက အစ္စရေးကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေပါတယ်။ Arrow ဆိုသည်မှာ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေး ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ လေကြောင်းဒုံးခွင်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများရေးသားထားတဲ့ အချက်အလက်များဟာ ခိုးယူခံရတဲ့အထဲ ပါသွားပါတယ်။ ပေကျင်းအနေဖြင့် Iron Dome နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
Iron Dome စနစ်ဟာ အဲဒီ့တုန်းက ဆိုဗီယက်လုပ် ကတ်တူရှာ ဒုံးများကို မြို့များပေါ်သို့ မကျရောက်အောင် ကြားဖြတ်ပစ်ချဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်တို့၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ဟာ အမေရိကန်တို့၏ ရေဒါပျောက်လေယာဉ်များနှင့် ခရုဇ်မစ်ဇိုင်းများကို ကာကွယ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Previous Article အမေရိကန်တို့နေ၀င်ချိန်စတင်လေပီလား(ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသစ်ထိပ်ဆုံးနေရာကို အမေရိကန်ထံမှ တရုတ်လွှဲပြောင်းရယူ)
Next Article စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများဖေဖော်ဝါရီ၂၈ရက်အထိရပ်ဆိုင်းကြောင်းတပ်မတော်ကြေညာ